I-China Khipha izithelo ezintsha ezingama-apula ezingama-2020 ezinabakhiqizi bamanani entengo nabaphakeli | AGR
I-Apple isithelo esimnandi esidliwayo sesihlahla iMalus domestica. Kuyisithelo esiyindilinga esingafika ngobukhulu obuhlukile nemibala
njengokuphuzi, okuluhlaza noma okubomvu. Ama-apula imvamisa amnandi impela futhi i-cam ingadliwa isentsha noma isetshenziswe ekudleni, amasoso, ukusabalala, amajusi noma
uphaya we-apula odumile. Imbewu ye-apula nayo ingachotshozwa kukhishwe uwoyela, osetshenziswa embonini yezimonyo. Isithelo siqukethe ama-carbohydrate amaningi, ushukela kanye nefayibha ngamazinga amancane amaprotheni namafutha.
Ama-apula we-2.Fuji abonakala ngosayizi wawo omkhulu, abomvu yonke indawo, ukuma okuyindilinga, nosayizi omaphakathi njenge-baseball. I-9-11% yesisindo sesithelo yi-monosaccharides, futhi inyama yayo icwecwe, imnandi futhi ibolile kunezinye izinhlobo eziningi zama-apula, ngakho-ke ithandwa kakhulu ngabathengi emhlabeni wonke.
Uma kuqhathaniswa namanye ama-apula, ama-apula eFuji anokuhle isikhathi eside ngaphambi kosuku futhi awadingi nokuthi agcinwe esiqandisini. Ingagcinwa isikhathi eside ekamelweni lokushisa. Uma ama-apula efakwe emanzini anosawoti u-5% imizuzu eyi-10, omisiwe, afakwa esikhwameni sokugcina kabusha, asivalwe afakwa esiqandisini, izinga lokushisa lilawulwa ngo-0-40 ℃, futhi lingagcinwa izinyanga ezingaphezu kwezingu-5 .
Isithelo esiphundu nesiphundu, se-apula singesinye sezithelo ezithandwa kakhulu futhi eziyintandokazi kubantu abathanda impilo, abathanda ukuqina abakholelwa ngokuqinile emcabangweni wokuthi "impilo ingcebo." Lesi sithelo esihle sigcwele izakhi ezinomsoco we-phyto, ngomqondo weqiniso, obaluleke kakhulu empilweni enhle.
Isithelo esiphundu nesiphundu, se-apula singesinye sezithelo ezithandwa kakhulu futhi eziyintandokazi kubantu abathanda impilo, abathanda ukuqina abakholelwa ngokuqinile emcabangweni wokuthi "impilo ingcebo." Lesi sithelo esihle sigcwele izakhi ezinomsoco we-phyto, ngomqondo weqiniso, obaluleke kakhulu empilweni enhle. Ama-antioxidants athile ase-apula anezinto eziningana ezikhuthaza impilo nezokuvikela izifo, futhi ngalokho, evumela isisho esithi, "i-apula ngosuku ligcina udokotela engekho."
Olandelayo: I-China Wholesale High Quality Competitive Price Red fresh Apple
China Isitolo esidayisa yonke impahla High Quality Competitive Inani ...